Gbanwee mgbidi ahụ | Ogologo ugogbe anya | Igwe Ọdụdọ
Ọ dịghị onye nwere ike ịhapụ n'azụ egwuregwu, ọ bụkwa na Uller® ka anyị maara nke a. Maka nke a, ndị otu anyị na ndị okike nwere mmasị n'ihe banyere freeride, egwuregwu ugwu na ezigbo njem, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji weta usoro kachasị ọhụrụ na ihe mkpuchi skis ma na-echekwa ogo na arụmọrụ kacha mma anyị si. na-eme na Uller® ebe ọ bụ na anyị mbụ na-ebupụta. N'oge a anyị na-eweta nchịkọta ọhụụ nke ihe nkpuchi ski na-eme ma maka ndị ụjọ na-atụghị ugwu ahụ na-anaghị atụ egwu ihe ọ bụla: nchịkọta ọhụrụ nke ski masks "AKWALLKWỌ"; Ndị a bụ ụdị pụrụ iche na-enweghị atụ nke enyo anya nwere oghere nwere ike ịgbanweta x-polar nke emere maka ogo na nkasi obi nke ndị na-agba ụgbọ mmiri na ndị snowboarders chọrọ iru oke ugwu ahụ ... Do chọrọ ịmatakwu banyere enyo ọhụụ ọhụrụ anyị "The Wall "?
Site na Uller® anyị na-achọ mgbe niile na skị na egwuregwu masks na-emetụ izu oke n'otu oge ahụ anyị na-enye mkpa ejiji ahụ kwesịrị n'ime ụwa nke egwuregwu ugwu. A na-emezi ugogbe anya anyị ka ọ dị mkpa maka ndị egwuregwu anyị na ndị freeriders, ndị maara ihe ha chọrọ ịdị njikere n'ezie maka ime ihe!
Dị ka ị maara, ụzọ ndị otu Uller® anyị si eweta ihe nkpuchi skai na ahịa bụ nke mbụ site na ịnakọta ozi niile dị mkpa iji mepụta atụmatụ ahụ ma site ebe ahụ, na-eme mgbanwe ndị dị mkpa ruo mgbe ị ga-enweta ihe ndị kachasị mkpa. nke ndị na-eme egwuregwu. Mgbe anyị rụsịrị ọrụ ike a, anyị mechara nweta nsonaazụ kachasị mma anyị na-achọ, ma ugbu a, anyị chọrọ ka ị lee anyị ule!
SKI MASKS NA INTANANTA MAGNETIC INTANET
Kedu ihe mere nchịkọta ọhụrụ nke ihe nkpuchi ski ULLER THE WALL® ọ bụ gị?
Modelsdị dị na nchịkọta anyị ULLER AKW WKWỌ ahụ® gụnyere sistemu eji agbanwe magnet. Sistemụ na - enye gị ohere ịgbanwe lenses n’oge ọ bụla, dịka ọnọdụ ihu igwe n’otu oge enyere. Nke a bụ ekele maka nju nke anyị webatara, na mgbakwunye na ijigide oghere na etiti ahụ, ọ dị mfe ịme. Cheedị na ị nwere ike ịgbanwe anya m na naanị 2 sekọnd oge !!
Ha gụnyere LENS dị iche ichenke ị nwere ike ịgbanwe dịka mkpa gị dị na ngwaahịa:
Anya mbụ na udi nke 3, zuru oke maka ụbọchị anwụ na-acha.
Leta nke abụọ nke mkpụrụ ụbọchị maka ụbọchị visibiliti na ọnọdụ adịghị mma.
UMUAKA SKI BRE N'WITHLỌ NT WITHKWU NDH ỌZỌ AKW TKWỌ AKW OKWỌ AKWECKWỌ AKW XKWỌ X.POLAR
Nchịkọta anyị nke nkpuchi nkpuchi ULLER THE WALL® ejiri teknụzụ kachasị elu na ngwa anya n'ụwa! Anyị na anya m High Tech Performance Gbasara Anya X-POLAR anyị na-enweta nkọwa na nghọta doro anya karịa nke na-enye ndị na-agba ịnyịnya ohere ịghọta gburugburu ha nke ọma na ọdịiche dị mma na agba dị egwu. Nnukwu nkọ ya na-eme ka ọdịiche dị na ezi ntụkwasị obi nke agba agba, si otú a na-eme ka ọhụụ nke gburugburu na mma dịkwuo mma.
Na Uller® anyị nwere teknụzụ kachasị elu na mbara igwe n'ụwa. Maka nke a, ndị freeriders na-ebido anyị ma na-ekpebi ịnọ. Nke a bụ ekele maka X-POLAR nke dị elu nke Tech Tech Performance Optics, nke anyị ji nweta nkọwa dị elu na nghọta doro anya nke ọhụụ, nke na-enye anyị ohere ịchọta ọdịiche dị iche na agba na oghere nke iko.
Ihe nlereanya anyị nke nkpuchi nkpuchi ULLER THE WALL® nke otu X-POLAR nke High Tech Performance Optics mere anyị tinyere sistemụ mgbanweta magnet. Usoro ohuru a na - enye gi ohere igbanwe oghere n’iru na ngwa ngwa oge obula mgbe ihu igwe n’elu ugwu na- aju ya.
Ọ bụ ekele maka onyonyo ha nwere, njigide nke oghere na etiti, ụzọ ọ dị oke mfe ịgbanwe lenses na naanị sekọnd abụọ. N'ime igbe anyị gụnyere lenses abụọ dị iche iche:
Udi nke isi nke atọ, nke zuru oke maka ụbọchị anwụ
Ogo na nkwenye
Ọzọkwa, nkpuchi nkpuchi ULLER THE WALL® Emere ha na ihe kacha mma iji nweta nguzogide na ike siri ike megide ụdị mmetụta ọ bụla. Ndị a bụ ihe nkpuchi ski nke nha ha na-enye ha ohere ịkọwa dị ka unisex, ebe ọ bụ na ndị na-agba anyị bụ ndị nwoke na ndị nwanyị na-eji ha eme ihe! Anya X-POLAR nke nwere usoro abụọ Dual Layer AntyFog sistemụ na-enyere anyị aka izere fogging nke na-echegbu onwe ya nke ukwuu n'ugwu, n'otu oge ahụ na ọ na-echedo anya anyị site na nchebe pụọ na radieshon ultraviolet. Na nke a mgbe niile mgbe ị na-enye nkasi obi na ịdị mfe nke anyị maara na ndị na-agba anyị chọrọ!
UFURUO NA-EME MB F
Ndị otu anyị Uller Our na-agbakwunye nnukwu ọrụ iji weta sistemụ ikuku pụrụ iche na enyo anya anyị nke na-arụ ọrụ maka ndị na-agba anyị n'oge niile na ugwu ahụ. Mgbanwe ikuku ziri ezi anyị hụrụ na nkpuchi mkpuchi nke Uller® “The Wall” na-enye anyị ohere inweta nkasi obi na ịdị nfe dị ka onye ọ bụla n’ahịa. Usoro ikuku anyị na-ebelata mmetụta nke okpomọkụ ma ya mere na-ebelata ohere nke ọsụsọ na ihu, ebe ọ bụ na ihe mkpuchi ski nwere ihu na ihu ihu n'ihu iji kesaa ikuku ngwa ngwa na ozugbo. Ghara ichefu oyi akwa nke ụfụfụ nke anyị nwere n’etiti oghere na ihu nke ihu, nke na-enye nkasi obi ma dabara adaba na ozi nke anya anyị nwere ihu ọma n’omume ọ bụla anyị na-eme n’elu ugwu.
Ma oburu na nke ahu ezughi ... Chefuo ahihia banyere nke ohuru ihe nkpuchi EBU AKW WKWỌ ahụ®! Usoro ọgwụgwọ ya na-eme ka ụbọchị dị ọkụ karị, ma ọ bụ n'oge ọrụ aerobic na ịrị elu, ihe nkpuchi ski na-ebelata fogging kpatara site na ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ dị n'èzí na n'ime. Ya mere, ndị na-agba anyị nwere ahụ ike zuru oke ịme ụdị ọrụ ọ bụla ekele maka:
Ugboro abụọ lens (okpukpu abụọ) na nchedo UV-400
Antifog ọgwụgwọ (mgbochi foogu)
STRAP SKI MASS NA-EGO NT -KWU
N'ezie, anyị enweghị ike ichefu nnukwu nkọwa gbasara ihe mkpuchi anyị ... Na nchịkọta nke ihe nkpuchi ULLER AKW WKWỌ ahụ® Anyị elekwasịwokwa anya gụnyere itinye ihe mgbochi na ihe ndozi mgbanwe dị mma maka ụdị isi na ihu niile, iji mee ka mkpuchi mkpuchi siri ike na enweghị ohere ịmịpụ. Na mgbakwunye, ha kwekọkwara n'ụdị okpu ọ bụla nke ndị na-agba anyị ma ọ bụ ndị egwuregwu egwuregwu ji arụ ọrụ ahụ!
OZI EGO SKI NA-EGO Ogo
Nchịkọta anyị nke ihe nkpuchi ULLER AKW WKWỌ ahụ® Ebere ha na maka freeriders. Na-arụ ọrụ arụmọrụ kachasị elu mgbe niile iji kwado ọrụ kachasị mma na ntụkwasị obi kachasị na ọnọdụ kachasị njọ n'oge omume Freeride. Ezubere atụmatụ anyị niile maka skị maka mkpa ndị otu freeriders chọrọ ngwaahịa a, ma n'ihe gbasara nkasi obi ma nkasi obi. Ma gị, ị na-anwa anwa ịnwale nchịkọta ọhụrụ anyị ma nwee ọ trulyụ n'ezie na njirimara ọrụaka anyị na-enye? Ezubere nke a maka ndị na-enyefe anyị n'obi, na ọchịchọ ịlaghachi n'ugwu!
Uller® bụ akara nkwado nke ndị ọrụ: Grupo Aramon (Formigal, Panticosa, Cerler, Javalambre na Valdelinares), Astún, Altitude HeliSki Aragón, Whistler Wander, Boi Taüll na El Dorado Freeride.
Anyị ga-adị njikere mgbe niile n'ụzọ kachasị mma. Nchedo nke anyị ọhụụ na anya anyị dị oké mkpa, n'otu oge ahụ na anyị ga-imeghari ka ọnọdụ ihu igwe e ar